Shiinaha Palletizing robot HY1010A-143 Soo saare iyo Badeecad | Yunhua
Palletizing waxaa loola jeedaa hawlgalka ku shubida shay sida kartoonka jiingado ee santuuqa ama qalab la mid ah qaab qeexan. Depalletizing waxaa loola jeedaa hawlgalka dejinta shayga la soo raray ee qaabka gadaal u dhaca.
Maaddaama mid ka mid ah moodooyinka ugu kulul ee loo yaqaan 'Palletizing and Depalletizing', HY1010A-143 waxaa loo isticmaali karaa wax soo saar kala duwan. Waxaad u isticmaali kartaa kartoono yaryar, boorsooyin yaryar oo bariis ah, iwm. Waa naqshad isku dhafan iyo qaab dhismeed ka dhigaya HY 1010A-143 mid sahlan oo lagu ilaalin karo.
6 10KG ± 0.08 3 kva 0-45 ℃ Qoyaan la'aan 170 kg Dhulka / saqafka IP65
± 170 ° + 85 ° ~ -125 ° + 85 ° ~ -78 ° ± 170 ° + 115 ° ~ -140 ° ° 360 °
Q1. Goorma ayuu kharashka wax ku iibinta ee robotku waxtar u leeyahay?
A. Tusaale ahaan u soo qaado Shiinaha, hadda mushaharka shaqaaluhu waa mid aad u sarreeya, gaar ahaan xoogga shaqaalaha. Haddii aad isticmaasho robot YOO HEART iyo hal farsamo yaqaan yaqaan rooti wanaagsan, waad yareyn kartaa 3-4 qarashka aadanaha.
Q2.Waa noocyo noocee ah oo badeecado lagu dhejin karo
A. alaabooyin badan oo u baahan palletized ama dib u dhigis ayaa isticmaali kara Robot.
Q3 .waa maxay mushaharka ugu badan ee robotka Palletizing
A. Waqtigaan la joogo, 165kg waa culeyska ugu badan ee la bixiyo, laakiin laga bilaabo Maajo 2021, waxaa jiri doona 250kg oo loogu talagalay dib u dhigista iyo dib u dejinta.
Q4.Ma dhigi karaa balastar-gacmeed wax-badan ka dibna hal shey markiiba
A. laba su'aalood tixgalinta, 1, miisaanka guud, oo ay weheliso culeyska clamps waa inuu ka yaraadaa mushaharka lagu qiimeeyo robotka. 2, clamps-ka ayaa ku filan inuu qabto badeecooyin badan.
Q5.Waa maxay faa'iidooyinkaaga marka la barbar dhigo astaanta kale ee Shiinaha.
A. sifiican, YOO qalbi dhagax waa sumcadda ugu horreysa ee shirkadda warshadaha Shiinaha, waxaan bilaabaynaa soo saaridda aalado laga bilaabo 2013, waxaana gebi ahaanba la iibiyay ku dhowaad 15000 unug adduunka oo idil. Sida kuwa kale u calaamadeystaan, CRP, JZJ, JHY, QJAR, waa uun dhowr sano. Waxaan u adeegsanaa soo-dejiyeheena RV-ga, dhammaan qaybahana waxay isticmaalaan sumadda Shiinaha, tani waa sababta aan u yareyn karno qiimaha robot-ka oo aan u oggolaanno dhammaan macaamiisha inay isticmaalaan robot tayo wanaagsan leh qiime jaban.
Hore: Raadinta aaladaha HY1165A-290
Xiga: Rinjiyeynta rinjiga HY1050A-200